android ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနေ့ရက်များ App ကို & Widget | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » widgets » နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနေ့ရက်များ App ကို & Widget လေး
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနေ့ရက်များ App ကို & Widget လေး APK ကို
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနေ့ရက်များ App ကိုနှင့်သင့်ကိုအထူးအဖြစ်အပျက်သည်အထိရေတွက်ရက်, နာရီနှင့်မိနစ် widget ကရက်။ သင်အလိုရှိသောကြောင့်အခမဲ့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ app ကိုနှင့်အတူသငျသညျအဖြစ်အများအပြားဖြစ်ရပ်များထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ App ကိုသငျသညျအစဉျအမွဲမေ့ခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောအစည်းအဝေး, မွေးနေ့, နှစ်ပတ်လည်နေ့လွဲချော်မယ့် date.Did များအတွက်သတိပေးချက်များနှင့်အတူလှပသောပင်မမျက်နှာပြင်ဝစ်ဂျက်ကို, နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲပြက္ခဒိန်နှင့်သတိပေးမှုရှိသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲဝစ်ဂျက်ကိုရေတွက်သည်သင်၏အထူးအဖြစ်အပျက်သည်အထိ left ရက်ပေါင်း: မင်္ဂလာဆောင်, အငြိမ်းစား, အားလပ်ရက်, အားလပ်ရက်
နေ့တန်ပြန်ဝစ်ဂျက်ကိုပင်မမျက်နှာပြင်နှင့် display ကိုရက်, နာရီနှင့် left မိနစ်4ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်အပျက်ဆင်းရေတွက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်ဖြတ်သန်းတခါတက်မှတ်, အဖြစ်အပျက်နေ့စွဲကတည်းကလွန်သောသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုခြေရာခံရန်သင့်အားဖွင့်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းရေတွက်ပါလိမ့်မယ်။
- ပင်မမျက်နှာပြင်များအတွက်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ widget က
- 1 × 1,2× 1,3× 1,4×3အရွယ်အစားပြောင်းပင်မမျက်နှာပြင် Widgets တွေ
- ရက်ပေါင်းနာရီမိနစ် Count
- တက် Count - ရေတွက်ရက်အကြာမှာ
- စတစ်ကာများ၏ Big စုဆောင်းမှု
- Widgets တွေအဘို့အသင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကိုသုံးပါ
- အဖြစ်အပျက်မှရေတွက်များအတွက် Nice စတော့ရှယ်ယာပုံရိပ်တွေ
- Daily သတင်းစာအိမ် screen ပေါ်မှာနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ timer နေရာမှာအဘို့အပတ်စဉ်, ဖြစ်-အပတ်စဉ်, လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်အထပ်ထပ်
- Backup ကိုနှင့် restore
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ app ကို home screen ကအဘို့အ Widgets တွေ၏ကြီးမားသောစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းညာဘက်သင့်အိမ် screen ပေါ်မှာတစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင့်ရဲ့ခြေရာခံရက်စွဲများကိုပြသနိုင်မထူးခြားတဲ့အရွယ်အစားပြောင်းစာရင်း widget က, သင့်လာမည့်ဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ပါရန်လျှောက်လွှာဝင်ရန်မလိုအပ်ရှိသည်။
သင့်အိမ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲကိုထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်သင့်ဖုန်းရဲ့ widget က menu ကိုသွားပြီးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ Widget လေး option ကိုတွေ့ပါရန်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်နှင့်ဆွဲပေါ်နေရာနှင့်သင့် home screen ကပေါ်သို့ drop ချင်သောရရှိနိုင်ဝစ်ဂျက်အရွယ်အစား၏တဦးတည်းအပေါ် Long ကနှိပ်ပါ။ သငျသညျထိုအဖြစ်အပျက်စာရင်းထဲကသင့်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကောက်, ဒါမှမဟုတ် home screen ကအသစ်တစ်ခုနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအဖြစ်အပျက်ကိုဖန်တီးရန်သစ်တစ်ခုခေါင်းစဉ်နှင့်ရက်စွဲရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ configuration ပေးတဲ့ dialog popups ပါလိမ့်မယ်။
app ကိုချသင့်ရဲ့ count ကခံစားကြည့်ပါနှင့် widget!
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ Widget လေး app ကို အသုံးပြု. အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤသည်အနည်းငယ်သိပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ bug ကိုပြင်ဆင်ချက် update ကိုဖြစ်ပါတယ်။
13.23 ကို MB